KAFTAN MA AHANEE WAA DHAB: Borussia Dortmund oo xaqiijisay inuu tababarka la qaadan doono ninka ugu orodka dheer adduunka ee Usain Bolt – Gool FM
KAFTAN MA AHANEE WAA DHAB: Borussia Dortmund oo xaqiijisay inuu tababarka la qaadan doono ninka ugu orodka dheer adduunka ee Usain Bolt
(Dortmund) 13 Nof 2016. Madaxa fulinta naadiga Borussia Dortmund ee dalka Jarmalka Hans-Joachim Watzke ayaa xaqiijiyay in ninka ugu dheereeya adduunka ee Usain Bolt uu tababarka la sameyn doono kooxdiisa mustaqablka dhow.
Bolt ee sagaalka jeer ku guuleystay bilada dahabka ee Olympicada adduunka ayaa ku fikiraya inuu marka uu oradada ka fariisto isku badelo laacib kubbada cagta ah.
The Guardian ayaa maanta shaacisay in Bolt uu dad badan si dhab ah arrinkan ugala hadlay isla markaana lagu wado inuu tababar la qaato Dortmund si uu kubbada cagta isugu diyaariyo.
Balse iminka Dortmund ayaa si cad u xaqiijisay inuu tababarka la sameyn doono.
“Kaftan ma ahan in Blot uu tababar nala qaadan doono,” Hans-Joachim Watzke ayaa sida au sheegay Kicker.
“Go’aanka waxaa la sameeyay isla waqtigaa. Guddoomiyaha Puma kaa oo sidoo kale ka mid ah agaasimayaasheena ayaa ii sheegay waqti ka hor in Bolt uu waydiistay haddii uu tababarka nala sameyn karo innaga.
“Waxaan isla markiiba ku iri inaan dhib ku qabin midaa sidoo kalena uu dhib ku qabin tababare Thomas Tuchel.
“Sida cad tababarka nalama sameyn doono marka aan leenahay labo kulan hal usbuuc, laakiin wuxuu nala sameynayaa marka ay xoogaa xasiloon tahay, sidoo kale kooxda way ka heli doontaa midaa.
Rafinha oo isbarbardhig ku sameeyay Guardiola iyo Ancelotti